Maoritania: Fahatsiarovana Ny Famonoana Ny Miaramila Mainty tao Inal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2012 2:12 GMT
Tokony ho androm-pifaliana ho an'ny Maoritaniana ny andron'ny 28 Novambra satria io no manamarika ny fahaleovantenany nisintaka tamin'i Frantsa.
Saingy, mampitamberina tsiaro mampalahelo nandatsahan-drà [en] ihany koa io andro io rehefa mampahatsiahy azy ireo fa tamin'io andro io tamin'ny taona 1990, dia nisy fanadiovana ara-poko natao tao anatin'ny tafika maoritaniana. Tao anatin'ny toe-draharaha tsy mazava dia farafahakeliny miaramila Afrikana mainty 28 no novonoina tany amin'ny tanàna kely lavitra ny renivohitra 500 km miala an'i Nouakchott. Noho izany sy tamin'ny andro faha-52 taonan'ny fahaleovantenan'i Maoritania, nisy vondrona Maoritaniana mpikatroka sy fikambanana mpiaro ny zon'olombelona 17, nitodi-doha nankany Inal [en], toerana nandevenana ireo niharan'ny fandripahana, niaraka tamin'ny sasany tamin'ny havan'ny miaramila novonoina, ho fanomezam-boninahitra azy ireo sy hitakiana ny rariny ary hijerena ny momba ity tranga ity, izay efa nalevina ela sy noadinoina. Nosamborin'ny manampahefana aloha io vondrona io tamin'ny voalohany, ary namotsotra ny mpikambana tao aminy avy eo. Tamin'ny herintaona, nisy famangiana tahaka izao ihany koa natao, nomanin'ity vondrona ity ihany. Tahaka ny tamin'ny herintaona, dia nitsidika ny tanàna ambanivohitr'i Sori-male [en] any amin'ny faritr'i Brakna ihany koa ny vondrona, ho fahatsiarovana ilay efa fantatra ho “Taon-Davenona”, nandritra ny fotoana nahafatesana miaramila Maoritaniana mainty an-jatony tanelanelan'ny taona 1989 sy 1990.
Nasongadin'ny habaka Al Watan (Ny Firenena) ny fijoroana vavolombelon'ny fianakavian'ireo niharan'ny fandripahan'olona, izay niresaka momba ny voina nahazo azy ireo sy ny tsy rariny nianjady tamin'izy ireo ihany koa, ary mitaky ny fanasaziana ireo tompon'antoka tamin'ny fandripahana [ar]:
Nilaza Rtoa Salmta Jalou fa novonoina teo ny vadiny sy ny anadahiny ka voina roa avy hatrany no nitontona tao aminy. Nianiana tamin'Andriamanitra izy fa notanterahina tsy nampahafantarina ny havany tamin'ny 28 Novambra, andro fankalazana ny fahaleovantenany izany fandripahana izany. Navadik'ireo mpandripak'olona ho voina anefa izany izay mampahatsiahy anay isan-taona io fandripahana io. Nasehon'i Salmta Jalou ny alahelony amin'ny fihodikodinan'ny manampahefana amin'ity tranga ity ary natao daholo ny zavatra azo natao rehetra tahaka ny vavaka ho an'ny niharam-boina natao tao Kihidi ary tahaka ny zavatra kely ny resaka momba ny fametrahana an-tsarintany ny fasana. Niangavy ny mpahay lalàna sy ireo manana feon'ny fieritreretana ilay vaky fo Salmta Jalou handray andraikitra hitondra ny rariny hitondra ny mangarahara amin'izay fairparitany ho “fandripahana mahamay”
Sarin'ny vondrona tany Inal, nalain'i Dedda Ould Cheikh Brahim. nahazoana alalana.
Nandray anjara tamin'ny dia rodobe nankany Inal i Dedda Ould Cheikh Brahim ary nibilaogy ny toe-javamisy, nilaza ny fizakàn-dry zareo ny fandrebirebena nataon'ny polisy mifandraika indrindra amin'ny fahatsiarovana ny fandripahana.
Taorian'ny kabary sy ny vavaka dia nanara-dia an'ilay mpanoratra ny boky mitondra ny lohateny hoe “Ny Afoben'i Inal” ny mpandray anjara sy ilay miaramila hany sisa velona Mamdou Se, izay nitondra azy ireo tany amin'ny havoana efatra feno vato ary nilaza fa io no toerana nandevenana azy sy ny namany rehefa avy nampijaliana.
Manakaiky ny toby miaramila ihany ny toerana ka nampitomany ny maro sy nahatonga ny hafa ho safotra. Nahatonga ny tanora sasany hiantso handray fiadiana izany, hamaliana faty, fa tsy hifokofoko.
Gerry Adams mitsikera ny fahanginan'ny vato nasondrotry ny tany Maoritaniana:
Nialoha indrindra ny fahatsiarovana ny faha-30 taona ny fahaleovantenan'i Maoritania. Nandripa-bahoaka tany Inal, faritra avaratr'i Maoritania, ny miaramila maoritaniana izay novonoina tsy nisy fitsarana ary tsy misy fiampangana mazava koa aza ny miaramila mainty 28. Niharan'ny fampijaliana ratsy endrika indrindra ihany koa ry zareo. Ary amin'ny fahanginana tsy mahita ny heloka, tsy misy miloa-bava ny rehetra. Mangina ny manam-pahaizana, toy izany ihany koa ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana ary ireo mpanaraka filamatra. Na ireo liam-pandrosoana miaro ny malemy sy ny osa koa aza dia mangina. Misy fahanginana mitovy amin'izany ihany koa avy amin'ny Islamista, izay mampihatra ny sharia. Mangina avokoa ny rehetra mialoha sy aorian'ny famonoana. Ary miverina ny famonoana ny Maoritaniana mainty sy ny famindra-toerana azy ireo, ary ny fakàna (an-keriny) ny volany, ary ny fanalàna baraka azy ireo eo ambany mason'ny rehetra.
Ao amin'ny Aswat (Feo) i Djibril Jalou mamoaka andian-dahatsoratra ao amin'ny bilaogy milaza ny heloka mihatra amin'ny Maoritaniana mainty. Eto isika afa-mamaky ny fijoroana vavolombelona ataon'ny miaramila sisa velona:
Ankilan'ny habibiana nitranga ny fisotroan'ny mpampijaly dite mipetraka amin'ny vatana mangatsiaka miandry ny famonoana ireo hafa, iray amin'ireo sisa velona nahare ny serzà “khotri” mamaky ny Koràny mandritra ny fotoana ipetrahany amin'ilay miaramila rehefa avy nahantony. Nilaza ilay sisa velona: “Tsy mino aho fa mino an'Andriamanitra izay nanome antsika ny Koràny masina sy manan-kery izy.”
Nihoatra ny adiny iray ny famonoana [fanantonana] faobe. Tena nasiaka ny fampijaliana [taorian'ny?] famonoana. Nisy gadra nampijaliana mafy tokoa ar ny sasany tamin'izy ireo notifirina tsotra izao satria tena tohina tokoa tamin'izay hitany. Mbola nisy dimy hafa novonoina tamin'io alina io: Li Hamdi, Mamdou Osman, Job Boker Bil, Sal Oumar, Sal Amdou el Hajj, hoy ny serzà Mansour. Mitovy tamin'izay efa nivoaka ao amin'ny boky “Helon'i Inal” izany filazana izany.
Ny sisa tavela ao amin'ny fahatsiarovana dia hoe miaramila mainty 28 no novonoina tamin'io alina io ary ny marina dia maro ny maty tamin'io alina io araka ny narakitry ny serzà Mansour ao amin'ny fijoroana vavolombelona noraisim-peo izay nanerena azy hanaiky fa nandray anjara tamin'ny famonoana izy. Nilaza ihany koa ny fijoroana vavolombelona fa tamin'ny 23 Novambra, noraofina ny miaramila mainty efa ela niasàna, nampijaliana sy norahonana ho faty ka maty noho ny fampijaliana ny sasany, toa an'i Sal Abdallah Moussa, Tahir iray izay nampijaliana mandra-maty teo am-bavahadin'ny fonja izay nisamborana an'i Loum. Maty i Sal Oumar rehefa niteny hoe “Mansour, omeo rano aho.” Nampijaliana izy mandrarìtra tanteraka ny rano tao aminy.
Mpikatroka Sidi Aly Moulaye Zeine mampiseho ny alahelony fa mitranga ao anatin'ny fetin'ny fahaleovantena ny fandripahana tao Inal:
Mivonona ny hankalaza ny 28 novambra ny sasany raha fahatsiarovana ny fisaonana izay tsy tody hatramin'ny farany koa izany ho an'ny hafa. Paradisan'ny maritiora ho an'i Maoritania, lasibatry ny lalàna mpanavakava-bolonkoditra sy ny jadon'ny miaramila. Amen
Tahaka izany ihany koa ny hetsiky ny mpanohitra “Aza kasikasihanao ny zom-pireneko”, nanao famorian'olona mitaky ny hanasaziana ireo rehetra tafiditra amin'ny famongorana ny Maoritaniana mainty. Saingy notsenain'ny fitondrana Maoritaniana tamin'ny famoretana sy ny etona mandatsa-dranomaso izany. Efa namoaka ny lisitra ahitana ny anaran'ireo ao anatin'ny tafika Maoritaniana voampanga tamin'ny heloka famonoana ny mainty ny Hetsika, indrindra fa ny filoha teo aloha Moaouia Ould Sid Ahmed El Tae.
Ity misy lahatsary navoakan'i habaka Al Akhbar ao amin'ny pejy Youtube-ny momba ny dia rodobe lavitr'ezaka mankany Inal 2012.